Skena & Dudziro inowanikwa kurodha mahara | IPhone nhau
Skena & Dudziro iyo ine mutengo wenguva dzose muApp Store ye2,99 euros uye iyo kwenguva yakati wandei inogona kutorwa pasi mahara zvachose muApp Store, inotibvumidza kutora mavara kubva kune chero chifananidzo chatinotora, kungave kubva mubhuku, gwaro, magazini, poster, kushambadza, bhuku rekuraira… Uye ishandure kuti ive mameseji.
Ichi chishandiso chinotipa isu chinyorwa chekuziva rutsigiro mumitauro inodarika makumi manomwe. Iyo inokwanisa kududzira mumitauro inopfuura makumi mapfumbamwe uye zvakare inokwanisa kuverenga mumitauro inopfuura makumi mana nemana. Ichi chishandiso, kusiyana nevamwe, hachipe chero mhando yekutenga mukati mekushandisa, kuti tikwanise kuishandisa pasina kutya kuwana chero muganho mukushanda kwayo.
Kutenda kune iyo Scan & Dudziro app tinogona kuverenga chero gwaro pabepa, mabikirwo ebhuku rekubika, manotsi uye tsamba, nzvimbo yekudyira, mabhawa uye kofi mamenyu, zvinyorwa zvemapepanhau nemagazini, zvikamu zvebhuku, mirairo nemanyorerwo, zvinyorwa zvemagetsi, zviratidzo zvemugwagwa, pamwe nekumapurisa nendege.
1 Shandisa scan & Dudziro Zvimiro
2 Uchishandisa iyo Scan & Dudziro application
3 Skena & Dudziro ruzivo
Shandisa scan & Dudziro Zvimiro
Shanduro izere mumitauro inodarika makumi mapfumbamwe (internet internet inodikanwa)
Teerera kune chinyorwa icho chakazivikanwa uye chakashandurwa mumitauro inopfuura makumi mana nemana!
Rongedza zvinyorwa, zviteedzere kune clipboard uye chengeta mune mamwe mapurogiramu
Goverana iwo mavara paFacebook, Twitter kana email
Zvinyorwa zvese zvakachengetwa munhoroondo uye zvinogona kutorwa chero nguva
Uchishandisa iyo Scan & Dudziro application
Sarudza mutauro wechinyorwa chekutanga senge mutauro unoziva chinyorwa.
Tora pikicha yegwaro (peji, rairo kana chero rumwe rugwaro)
Achizviendesa «Scan» bhatani
Chinyorwa chinozivikanwa chichaonekwa pachiratidziro nesarudzo yekusarudza mutauro unobva uye mutauro unonangiswa (dudziro).
Nokusarudza mutauro, iwo mavara ekutanga anozoshandurwa otomatiki uye anozoonekwa pazasi pechiso.
Kuti unzwe kushandurwa, tinya bhatani «Inzwi»
Skena & Dudziro ruzivo
Kugadziridza kwekupedzisira: 10-10-2015
Saizi: 39.4 MB
Mitauro: Spanish, German, Simplified Chinese, Chinese Chinese, Korean, French, Chirungu, Italian, Japanese, Dutch, Portuguese, Russian, Swedish, Turkish
Inoenderana nezvose zvishandiso kubva kuIOS 6.0, saka inoenderana ne iPhone 4 zvichienda mberi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Skena & Dudziro inowanikwa kuti utore mahara